Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadka Toronto ilaa Grenada ee Air Canada hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Caribbean • Wararka Grenada • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Kanadiyaanka ayaa aad u xiisaynaya inay safraan Grenada waxay filaysaa inay soo badan doonaan safarada caalamiga ah inta lagu jiro xilliga jiilaalka, gaar ahaan meelaha cimilada diiran.
Grenada waxay soo dhawaynaysaa dib ugu soo laabashada adeegga hawada ee Kanada markii ugu horreysay muddo sannad ah.
Sanadka 2019, Grenada waxay soo dhaweysay wadar ahaan 17,911 soo booqdayaal Kanadiyaan ah.
Travelbrands waa shirkad Canadian ah oo ay leedahay oo ay maamusho shabakad “super qaybinta” oo ka kooban shan tafaariiqle/nooca wakaalada socdaalka ee khadka iyo 10 nooc oo dalxiisayaal ah.
Axad, Oktoobar 31, Grenada waxa ay soo dhaweeyeen dib ugu soo laabashada duulimaadka diyaaradaha ee Canada markii ugu horeysay muddo sanad ah. Duulimaadka Air Canada 1066, Boeing 737 Max 8, waxay soo degtay 2:55 PM. Kabtan John Petropoulos iyo 169 rakaab ah ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyay Maamulka Dalxiiska ee Grenada (GTA) Petra Roach, Maamulayaasha Suuqgeynta Renee Goodwin iyo Shanai St Bernard iyo muusigga birta ah ee laxanka garaaca badan. Duuliyaha iyo shaqaalaha ayaa la soo bandhigay buug miiska qaxwada oo qurux badan, Grenada Heritage "Safarka Sawirka ee Goobta iyo Waqtiga" iyo xulashada shokolaatada gudaha laga sameeyay. Rakaabka waxa la siiyay bacaha kubado hibada oo ay ku jiraan ururinta alaabta Grenadian oo sax ah.
Si loo kiciyo baahida duullimaadyada toddobaadlaha ah ee laba jeer ee ka yimaada Toronto, Axadaha iyo Arbacada, GTA waxay bilowday olole suuqgeyneed oo gardarro ah iyadoo adeegsanaysa tabo dhaqameed, dhijitaal, iyo warbaahinta bulshada ee suuqa Kanada Air Canada iyo ururka socdaalka, TravelBrands.
The Air Canada Ololaha waxa ka mid noqon doona, laakiin aan ku xaddidnayn, firfircoonaanta dhijitaalka ah ee boggooda Facebook iyo Shabakadda Cimilada iyo sidoo kale credit 5,000 Aeroplan miles rakaab kasta oo ballansanaya meesha uu u socdo inta lagu jiro ololaha saddexda toddobaad ah.
Travelbrands waa shirkad Canadian ah oo ay leedahay oo ay maamusho shabakad “super qaybinta” oo ka kooban shan tafaariiq/nooca wakaalada socdaalka ee khadka iyo 10 nooc oo dalxiisayaal ah. Sunquest, Exotik Tours, Holiday House, iyo noocyo kale sida FunSun Vacations, Boomerang Tours, RedTag.ca iyo ALBATours dhamaantood waxay ku hoos jiraan hal dallad, taasoo ka dhigaysa TravelBrands xarun awood ku leh warshadaha safarka ee Kanada.
Ololahooda waxa ku jiri doona laba toddobaad oo ay la wareegayaan bogga guriga ee Redtag.ca, Deal Alert ogaysiisyada riixitaanka, xayaysiisyada banner-ka iyo qoraallada muuqaalka ah. Wakiilada safarka ee u ballansada fasaxyada Grenada waxay heli doonaan 5 jeer dhibcaha daacadnimada caadiga ah inta ololaha lagu jiro.
Maamulaha guud ee GTA, Petra Roach ayaa faallo ka bixisay, “Dadka reer Kanada waxay aad u jecel yihiin inay safraan, waxaanan filaynaa inay soo badan doonaan safarrada caalamiga ah inta lagu jiro xilliga jiilaalka, gaar ahaan meelaha cimilada diiran. Haddaba waxa loo baahan yahay in aan ka dhex muuqano suuqa si aan uga faa’iidaysano dalabaadka iyo mawqifkan nalooga baahan yahay Grenada oo ah meesha ugu habboon ee dadka Kanadiyaanka ah ee doonaya inay ka baxsadaan kulaylka qabow oo ay u fasaxaan meel dhab ah."
Sannadka 2019, Grenada waxay soo dhawaysay wadar dhan 17,911 Canadian ah.